AUscene dia namoaka an'i Aldinga Airfield maimaim-poana ho an'ny MSFS 2020
Fampidinana: 7,072 alaina 966,914 fotoana.
Kalitaon'ny payware maimaim-poana? Tongasoa eto amin'ny Aldinga Airfield - Adelaide (YADG) V1.0 ho an'ny Microsoft simulator sidina 2020!
Any afovoan'ny faritra McLaren Vale Wine, Aldinga Airfield no vavahadinao hijerena ireo faritra hafa any South Australia, ao anatin'izany ny Nosy Kangaroo sy ny saikinosy Eyre. Izahay dia namolavola ny seranam-piaramanidina ho amin'ny antsipiriany avo lenta miaraka amin'ny endri-tsoratra enti-miasa enti-mivavaka ho anao hizaha sy hahitanao.
Aldinga Airfield koa dia sidina fohy fotsiny avy any Adelaide, inona no andrasanao? Ity ny fahafahanao mahita ity toerana tena mahavariana ity ary hahita ny kalitaon'ny vokarinay maimaim-poana!
Famerenan-tànana an-tsokosoko Aldinga Airfield ho an'ny MSFS
Teknolojia PBR tena misy vahaolana avo lenta
Trano azo tanterahina
Fiaramanidina static amin'ny antsipiriany
Fametrahana legioma manokana
Orana mavitrika amin'ny Skylights
Fahazavana amin'ny alina
Azo alaina maimaim-poana izao ao amin'ny:
Sokajy: Vaovao MSFS